Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fomba vaovao 2 mahandro henan-kisoa: matsiro sy malefaka
Ny henan-kisoa dia iray amin'ireo akora mahandro mahazatra indrindra, fa ny fanaovana sakafo vita amin'ny henan-kisoa dia mora atao. Tsy zava-bita mora ny mahandro henan-kisoa sy mitazona tsiro malefaka sy malefaka. Raha izany no izy, mba hahandro sakafo matsiro tsara dia tsy maintsy ilaina ny akora vaovao sy avo lenta.
Miaraka amin'ny iraka hanome ho an'ny besinimaro any Hong Kong ny tsiron-kisoa matsiro sy malefaka, ny mpanorina ny "Hong Kong Heritage Pork" John Lau Hon Kit dia natokana amin'ny fiompiana ny kisoa Iberico eo an-toerana "Tai Chi Pig" izay mifanaraka amin'ny tsirony. an'ny mponina ao Hong Kong. Mba hampiasana tsara ireo akora avo lenta toy ny hena avy amin'ny "Hong Kong Heritage Pork" nataon'i John Lau Hon Kit, mba hahafahanao mahandro sakafo henan-kisoa matsiro, malefaka ary matsiro, dia mila toro-hevitra ianao. Ireto ambany ireto dia nanasongadina toro-hevitra 2 ambony momba ny fomba fanomanana sy fahandro henan-kisoa izay hitarika ho amin'ny sakafo mendrika chef!
Rehefa manomana henan-kisoa, ny ankamaroan'ny olona dia manasa ny hena tapaka amin'ny rano ary maina alohan'ny handrahoana azy. Na izany aza, ny henan-kisoa dia manana mamy kely, indrindra fa ireo kisoa Tai Chi izay nobeazin'i John Lau Hon Kit, izay manitra sy mamy voajanahary. Raha kobanina amin'ny rano madio, dia ho voasasa ny tsiro umami amin'ny henan-kisoa.
Mba hiadiana amin'ny fahaverezan'ny tsiro umami amin'ny henan-kisoa, dia asaina manondraka ny hena amin'ny vahaolana misy sira sy rano - izany no atao hoe brining. Izany dia ahafahan'ny kisoa mandray sy mitazona rano avy amin'ny vahaolana sira sy rano maivana, izay mampitombo ny hamandoana sy ny tsiron'ny hena. Ankoatr'izay, rehefa voadio ny henan-kisoa, dia mihamalemy ihany koa izy amin'ny alàlan'ny fivontosan'ny fibra hozatra. Ny dingan'ny fandrahoan-tsakafo dia mamandrika ranon-javatra be dia be ao anatin'ny henan-kisoa ka tsy mety ho lasa etona avokoa izany mandritra ny fandrahoana sakafo, ka miteraka hena mando sy be ranony.
Hena mahandro mahamay
Ankoatra ny fomba fanomanana, ny fomba fandrahoanao ny hena sy ny hafanana ampiasainao dia mety hisy fiantraikany amin'ny fivoahan'ny henan-kisoa. Raha masaka be loatra ny henan-kisoa, ny hafanana ambony dia hamokatra fanehoan-kevitra simika hanesorana ny fibre hena, hahatonga ny kisoa ho henjana ary hanimba ny tsirony tany am-boalohany.
Koa satria ny mari-pana ambony dia manimba ny kalitaon'ny hena, ny fandrahoan-tsakafo miadana amin'ny hafanana ambany dia tonga lafatra mba hitazonana azy ho malefaka sy mamy. Ny fandrahoan-tsakafo miadana dia midika hoe fandrahoan-tsakafo mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fomba tsy misy hafanana sy sous vide, izay afaka manakana ny henan-kisoa tsy hiharan'ny hafanana ambony ao anatin'ny indray mipi-maso, izay manampy amin'ny fanakatonana ny hamandoana ary mitazona ny hena malefaka. Fanampin'izany, ny fandrahoan-tsakafo ambany hafanana sy miadana dia afaka misoroka ny fatiantoka otrikaina rehetra izay mitranga amin'ny hafanana ambony, ary koa mampihena ny fatran'ny tavy, ka ny kisoa dia mitazona tsiro malefaka sy mamy.
Torohevitra momba ny fomba fahandro mahandro: Iberico Pork Chop miaraka amin'ny dibera sy anana
Miaraka amin'izany rehetra izany dia afaka mahandro sakafo kisoa miadana ao an-trano ianao. Amin'ny fampiasana ny henan-kisoa Tai Chi natsangan'i John Lau Hon Kit ary manaraka ny fomba fanamboarana etsy ambany, dia azonao atao mora ny manamboatra hena kisoa masaka miadana miaraka amin'ny dibera sy anana.
2 tapa-kisoa Tai Chi natsangan'i John Lau Hon Kit, dibera 1 sotro, sira, thyme, poivre noir, ary tongolo gasy mba hanandrana
1. Afangaro ny henan-kisoa Tai Chi avy amin'ny henan-kisoa Hong Kong Heritage (John Lau Hon Kit) ao anaty rano masira mandritry ny 30 minitra.
2. Hamainina amin'ny lamba famaohana taratasy sy palitao miaraka amin'ny dibera, anana thyme ary poivre noir ny henan-kisoa Tai Chi avy amin'ny toeram-pambolen'i John Lau Hon Kit ary avela hilona mandritra ny adiny 1 eo ho eo.
3. Apetraho ao anaty kitapo misy tombo-kase ny henan-kisoa Tai Chi avy amin'i John Lau Hon Kit natao ho an'ny fandrahoan-tsakafo miadana.
4. Apetraho amin'ny fomba fahandro miadana na lafaoro etona amin'ny 65 degre Celsius mandritra ny adiny 2 ny lafaoro miadana.
5. Atsofohy ao anaty vilany fisaka ny tongolo lay, ampio ny henan-kisoa efa masaka miadana, dia endasina 2 minitra eo ho eo ny andaniny roa.
6. Araraka amin'ny henan-kisoa ny sisa tavela amin'ny kitapo voaisy tombo-kase ary ankafizo.
Momba ny "Tai Chi Pig" notezain'i John Lau Hon Kit
Taorian'ny fikarohana sy fiompiana an-taonany maro, ny kisoa Tai Chi notezain'i John Lau Hon Kit dia manasongadina ny fihinan'ny kisoa Burke britanika, ny hain'ny kisoa Landrace Danoà ary ny loko mena midorehitra amin'ny kisoa Duroc Espaniola. Be ranony sy malefaka miaraka amin'ny fatran'ny tavy sahaza, ny henan-kisoa Tai Chi matsiro sy mamerovero dia natao amin'ny tsiron'ny mponin'i Hong Kong ao an-tsaina.